Nzọụkwụ 25 iji nwee ihe ịga nke ọma: njikarịcha njin nchọta na ịde blọgụ azụmahịa | Martech Zone
Monday, August 17, 2009 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Na njikere maka Bọọgụ Indiana, na na enyem aka nke Bryan Povlinski, M ulo oru a 75 peeji nke eBook na a ton nke ndụmọdụ, Atụmatụ, aghụghọ na ihe nzuzo na njikarịcha njin ọchụchọ na ịde blọgụ azụmahịa.
Anyị nyere ihe karịrị 100 mbipụta na Blog Indiana na nzaghachi dị ịtụnanya. Enwere m ekele maka nkwado niile!
Ebe ọ bụ na nke a bụ mbụ m eBook, Anọ m na-enweta ụfọdụ ndụmọdụ site na ụfọdụ ndị ọzọ na-ede blọgụ na-etinyela eBooks na weebụ. Ndụmọdụ mbụ m nwetara bụ ịbelata ego (site na $ 99) maka obere oge. Nke a bụ ebumnuche abụọ… ọ na-enweta eBook na mgbasa site na ime ka ọ dị obere ọnụ na ọ na-ewepụta ọfụma na akwụkwọ ahụ.
Danloduo Isiokwu Ndị Dị na Magazin A i gha ahu oke akwukwo a. Aga m edebe ọnụahịa na $ 9.99 nwa oge - ruo mgbe ebudatara akwụkwọ nke m malitere ịhụ ụfọdụ mkpọtụ. Ya mere malite uzu!
Best of Luck Douglas Maka gị ebook ọhụrụ,
Aug 19, 2009 na 5:14 PM
Enwere m obi ụtọ ịnweta otu ebook a na Blog Indiana na WOW. Ọ bara uru karịa ihe karịrị $ 9.99! Ejiri ọdịnaya dị ukwuu juputara na SEO. Emebeghị m ọkara ụzọ iji akwụkwọ ahụ mee ma ekpebiela m ibipụta ya ma debe ya dị ka ntụpọ desktọọpụ. Will gaghị emechu ihu! Nnukwu ọrụ Doug & Bryan!
Aug 24, 2009 na 5:01 PM
Di egwu, Doug! Echere m na ọ na-ere nnukwu!